Yiyiphi i-Amazon ekuthengiseni izixhobo ezenza ubomi bakho bube lula?
Ukuba unamava okuthengisa iimveliso kwi-Amazon, kufuneka wazi ukuba yinkqubo echitha ixesha efuna imizamo ebalulekileyo kunye nokuphucula rhoqo. Awukwazi ukulawula zonke iinkalo zoshishino ngokwakho, ngokukodwa xa usebenzisa i-Amazon njengomthombo wokuthengisa owongezelelweyo. Ngethamsanqa, unokufumana ezininzi zeengcali ze-Amazon ezithengisa izixhobo eziza kwenza ubomi bakho bube lula - inexpensive vapor cigarettes. Ukusebenzisa kwabo, uya kuba nexesha elingakumbi ekuphuhliseni ishishini lakho kwaye ukhawuleze inkqubo yokubeka esweni i-metrics yamashishini.
Esi sithuba esifutshane sinikezelwe ngendlela ongayiphucula ngayo ishishini lakho usebenzisa ii-Amazon zokuthengisa izixhobo. Ngoko, makhe sijonge ngakumbi ezi zixhobo. Apha ndibaphulaphula oko bakhonzayo, kungekhona ukuba ngaba ndiyincoma njani.
I-Jungle Scout iyi-software eyenziwa ngokuzenzekelayo eyenza ukukunceda ukuba uthole iimveliso onokuzuza kusuka. Kunengqiqo ukusebenzisa le sixhobo kwiklasi yokuqala yokuphucula ukulungiselela ukulungiselela ukulungiswa komsebenzi njengoko kunokunciphisa ixesha lokuqikelela kwaye kupheliswe yonke ingozi yokuqalisa.
Kukho iindlela ezimbini ongasebenzisa ngayo i-Jungle Scout app. Iyokuqala iyisicelo sewebhu. Iyakwenza ukwazi ukufumana iimveliso zeemarike ezithengisayo kunye nemveliso enenzuzo kuyo yonke ikhathalogu ye-Amazon. Uhlelo lokusebenza lwe-Jungle Scout lunikeza ithuba lokucoca yonke i-database ngexabiso, ukuthengisa, kunye necandelo ukuze ufumane i-inventory efanelekileyo kakhulu. Ukongezelela, usebenzisa le sixhobo, unako ukulandelela izikhundla zesikhundla somqhubi kunye nexabiso. Ukusebenzisa esi sixhobo njengokongezwa kwe-Chrome, unokufumana ulwazi lweemveliso kwangoko naluphi na iphepha njengoko uphephaza. Kuya kukunika ixabiso lemveliso nganye, isikhundla sesikhundla, isibalo sokuhlaziya kunye nokunye okuthelekiswayo kwemveliso.
I-AMZ Tracker yinto ekhethekileyo yocwaningo lwemiveliso yama-Amazon abathengisi. Inceda ekukhuliseni izikhundla ngoncedo lokukhuthazwa, ukulungiswa kwezinga lokuguqulwa komgangatho kunye nokuhlalutya komncintiswano.
Nangona kunjalo, inzuzo eyinqobo le software ingakunika ngophando lwegama elingundoqo. Ngokwenkcazelo yewebsite yenkampani, i-AMZ Tracker yayinguye yokuqala yegama le-Amazon igama elikhe laveliswa. Kuthetha ukuba unedatha enkulu yeemfuno ze-Amazon kunye nokwanelisa iimfuno zakho zokulungiselela. Ukusebenzisa esi sixhobo, unokubona indlela amagama angundoqo aphathelene nemigangatho yemveliso yakho kwiziphumo zophando ze-Amazon.
Ngokutsho kweqhinga elikhuselayo le-AMZ Tracker, unokufumana izibhengezo zokuhlaziywa kakubi ngalunye ixesha abathengi bakho behamba ngaphantsi kwama-5. Ikunika ithuba lokuphendula ngokukhawuleza ukuxazulula iingxaki zabo kwaye ubacele ukuba baphakamise ukulinganiswa. Enye incedo e-AMZ Tracker isebenzi isilumkiso. Le nkonzo inikeza izilumpa naziphi na ezinye abathengisi bazame ukuhlambala uluhlu lwakho. Unokuzibuyisela ngaphambi kokuqokelela idatha ebalulekileyo kwimveliso yakho.
Ngoko ke, esi sixhobo singaphezu kwebalawuli nje kuphela njengoko kukunika ingqiqo indlela yokwenza ngcono uluhlu lwemveliso yakho, ukuphucula umgangatho wakho wemveliso, uze uvele kwi-Amazon Thenga ibhokisi.